Ihe ngosi 7 Galaxy ga-enweta Android Nougat na Ọktọba ma ọ bụ Nọvemba dị ka Samsung kwadoro Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na ọ bụ ụbọchị ole na ole kemgbe Samsung nyere iwu Galaxy Cheta 7 ọhụrụ, nke a na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ndị isi egwuregwu na ahịa ekwentị. Ma ọ bụrụ na n'ụtụtụ a, anyị maara na nsụgharị dị ike karị nke njedebe ga-adị na China n'oge na-adịghị anya, yana 6 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa dị n'ime, na nkeji ikpeazụ anyị nwere ozi ọma na ozi ọma.
Na bụ na Samsung ka eze kwadoro na onye ọhụrụ nke ezinụlọ Galaxy Note ga-emelite ya Android Nougat n’ime ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ, ya bụ, n’agbata ngwụcha ọnwa Ọktoba na mmalite ọnwa Nọvemba.
"Iwulite ebe obibi siri ike na nke na-enweghị ntụpọ maka ndị ọrụ dị oke mkpa, yabụ na anyị na-eme atụmatụ ịme nnwale beta zuru oke tupu ịtọhapụ mmelite OS ọ bụla."
Okwu ndị a na-ebu mbinye aka nke Koh Dong-jin, Onye isi oche nke Samsung Mobile, nke yiri ka ekpebiela inye iwu nke arụmọrụ nke ụlọ ọrụ South Korea, ma na-ahụ maka ọkwa na-ekwupụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ niile metụtara ngwaọrụ ya.
N'oge a anyị ga-echere ọbịbịa nke 7 Galaxy Note na ahịa, ihe ga - ewere ọnọdụ na Septemba 2 yana maka nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, nke anyị na - echeta maka ugbu a Google amalitebeghị, anyị gara n'ihu ịnwe naanị nsụgharị Ọnwụnwa maka ngwaọrụ Nexus.
Ì chere na Samsung ga-edebe okwu ya iji melite Ggalaxy Note 7 na gam akporo Nougat ngwa ngwa?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ihe ngosi 7 Galaxy ga-enweta Android Nougat na Ọktọba ma ọ bụ Nọvemba dị ka Samsung kwadoro
Frederick Lamar dijo
Samsung abụghị nke ọma site na arụmọrụ ahịa ya ...
Na-esote afọ ma eleghị anya, ha ga-emelite ụdị nke gam akporo kachasị na Note 7.
Zaghachi Federico Lamar